MARA Hillsboro Airport KHIO FSX & P3D - Rikoooo
Ọdụ ụgbọ elu Hillsboro KHIO FSX & P3D
downloads 6 509
Ebe a bụ Hillsboro Airport (KHIO) Oregon USA, a mma e bipụtara na njikọ na 2014 Oregon International Air Gosi. The ebe ndị mara mma nwere nnukwu agwaogwa nke ụdị mere site na-ede akwụkwọ na ndị ọzọ na artists maka ihe omume a.
Otu n'ime ọtụtụ ihe enịm ke ebe ndị mara mma, ndị mig-21 nke Premier Space Systems bụ ihe na-ẹkedori Satellites. -Agụnye foto-adị n'ala textures, n'abalị textures, Nike hanga. Ebe a mara nnọọ zuru ezu na nwere nnukwu foto dị n'ala.
Ihe omuma: Onye edemede nke ndi mara mma gosiputara ndi n’aru Rikoooo na ya anabataghi odida ya kariri simulators o nwaputara onwe ya (imaatu: Prepar3D)
Onye edemede: Rick Keller
Wayne Wayne Intl Airport P3D 1.1